विवाह - Pariwartan Khabar Pariwartan Khabar
२०२१ मा बिहे गर्ने योजनामा यी बलिउड सेलिब्रेटी !
कोरोनाका कारण सन् २०२० सबैको लागि सकसपूर्ण रह्यो । आफूले योजना बनाए अनुसार कसैले पनि काम गर्न सकेनन् । धेरै बलिउड सेलिब्रेटीहरुले २०२० मा विवाह गर्ने योजना बुनेका थिए ।
१२ फागुन २०७६, काठमाडौं कुवेतमा एक जोडी विवाह गरेको तीन मिनेटमै छुट्टिएका छन्। यो विवाह कुवेतको इतिहासमा नै सबैभन्दा कम समयको भएको बताइएको छ। डेली मेलका अनुसार अदालतमा विवाहको सम्झौतामा
अनौठो चलनः जहाँ एक पुरुषले दुई महिलासँग विवाह गर्नैपर्ने
२८ माघ २०७६, काठमाडौं हामीलाई थाहा छ प्रत्येक देशमा विवाह सम्बन्धी आ-आफ्नै रीतिरिवाज र परम्परा हुन्छन्। जहाँ एक युवक र एक युवतीको सम्बन्ध गाँसिने गर्दछ। तर अफ्रिकाको इरिट्रीया नामक देशमा
किन मोटाउँछन् विवाहपछि मानिसहरु?
२१ माघ २०७६, काठमाडौं अधिकांश मानिसहरु विवाहका लागि मोटाउने र दुब्लाउने गर्दछन्। विवाहमा आर्कषक देखिन शरिरलाई सन्तुलनमा ल्याउन धेरैले निकै मेहनत पनि गर्दछन्। तर विवाहपश्चात् भने मानिसहरु शरिरको फिटनेसमा वास्ता
विवाह अगाडि हुनेवाला जीवन साथीसँग सोध्नै पर्ने यी प्रश्न
१६ माघ २०७६, काठमाडौं हरेक पुरुष होस् या महिला आफ्नो जीवनसाथीसँग सुखमय बितोस भन्ने त चहान्छन् नै। जुन सुखमय जीवनका लागि दुई पार्टनबीचमा कुनै समस्या हुनु उपयुक्त हुँदैन। प्रेम विवाह
विवाहलगत्तै झुक्किएर पनि नगर्नुहोस् यी कार्य
१० माघ २०७६, काठमाडौं विवाह अगाडि र पछाडिको सम्बन्ध उस्तै हो भन्ने सोच छ भने परिवर्तन गर्नुहोला। व्यक्ति एकै भए पनि विवाह अगाडि र पछाडिको सम्बन्धमा केही विषय परिवर्तन हुन्छ।
कसरी बनाउने विवाहपछिको जीवन खुसीमय?
०२ पुष २०७६, काठमाडौं जीवनभर साथका लागि बिवाह गरिन्छ। त्यसैले, विवाहपश्चात् जीवनलाई सुखद् बनाउनका लागि एक–अर्कालाई बढीभन्दा बढी समय दिन आवश्यक पर्दछ। पति–पत्नीसँगै बिताएको समयले एक–अर्कामा खुसीको सञ्चार गर्छ। विवाहपश्चात्
बेहुलीलाई सिन्दुर हाल्न खोज्दा बेहुलाको हात नचलेपछि ४ लाख जरिवाना
०१ पुष २०७६, झापा झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–२ स्थित विवाह मण्डपमा बेहुलीलाई सिन्दुर हाल्न खोज्दा बेहुलाको हात नचलेपछि बेहुलीको परिवारलाई बेहुलाले चार लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेका छन् । मंसिर २९ गते
२१ मंसिर २०७६, काठमाडौं बैंस छ, उमेर छ अनि रुप पनि छ। तर, विडम्बना शहरभरि चहार्दा पनि बिहेका लागि केटा नै पाइँदैन। यो समस्या हो, ब्राजिलको नोइभा डो कोर्डेरियोका युवतीहरुको।
विवाहपश्चात यसैकारण मोटाउँछन् दम्पति
०५ कार्तिक २०७६, काठमाडौं भनिन्छ, विवाहपश्चात अधिकांश महिलाको तौल बढ्छ। तर, महिलाको मात्रै नभएर पुरुषहरुको पनि तौल बढ्ने गरेको देखिन्छ। पारिवारिक झमेलाको बीच पनि प्रायः जसो दम्पतीको विवाह भन्दा पहिलेको
विवाह गर्ने उमेर १८ तोक्न सांसदको माग
२४ साउन २०७६, काठमाडौं संविधानतः नेपालमा बिहे गर्ने उमेर २० वर्ष तोकिएको छ। तर, सांसदहरुले २० वर्ष नै नपुगी बिहे गर्ने चलन बढेको भन्दै विवाहको उमेर १८ वर्ष तोक्न माग